Mampiseho Ny Ratra Tsy Sitran’i Chili Ny Fahafatesan’ilay Lehiben’ny Polisy Miafin’i Pinochet · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2015 4:59 GMT
Ny taona 1973, nandrodana ny fanjakan'ilay Filoha Shiliana sosialista Salvador Allende i Pinochet, nanamarika ny fanombohan'ny didy jadon'ny miaramila izay naharitra 17 taona io. Nandritra izany fotoana izany, olona niisa maherin'ny 3.000 no maty ary an'aliny no nahiditra am-ponja sy nampijaliana.
Manaraka an'i Pinochet, i Contreras no lehilahy faharoa natanjaka indrindra tamin'ny fitondrana. Ny taona 1993, nosazian'ny Fitsaràna Antampony tao Chili hifonja 526 taona izy, noho ny fakàna an-keriny miisa 75, famonoana olona telo, fikambanana tsy ara-dàlana roa mpanao heloka bevava ary fakàna an-keriny madinidinika. Nanefa ny saziny tany amin'ny fonjan'i Punta Peuco izy talohan'ny nitondrana azy tao amin'ny Hopitaly Miaramila tao Santiago noho ny olana ara-pahasalamana. Maty tamin'ny alin'ny 7 Aogositra 2015 izy taorian'ny fangirifiriana naharitra 10 volana.
Nilaza ny fahafatesany tamin'ny fanambaràna an-gazety ny Zandarimaria Shiliana, izay nahagaga ny olona sasany tamin'ny fampiasàny ny teny izay mbola mahatonga resabe ao amin'ny firenena, toy ny mpamaritoetra namaritana ny mombamomba ny fitantanan'i Pinochet hoe: “fitondrana jadona” VS “fitondrana miaramila”.
Niova vetivety ho fety fankalazàna manetriketrika ireo hetsi-panoherana tany amin'ireo faritra sasany tao an-drenivohitry ny firenena.
Hevitra sasany nozaraina teny an-dàlana teny, izay mety hitondra amin'ny fampihavanana ny firenena. Ilay mpikambana ao amin'ny Kongresy avy amin'ny tsy miankina, Tucapel Jiménez, zanaka lahin'ny mpitarika ny sendikà, izay novonoina nandritra ny fitondrana jadona miaramila noho ny nanoherany ny fitondrana, nilaza izao tamin'ny tafatafa ho an'ny televiziôna TVN:
Amin'ny lafiny iray, nanome fomba fijery mitsikera kokoa ny amin'ny dikan'io zava-nitranga io ao amin'ny toeran-dahatsoratrany “Manuel Contreras, mpanao raharaha ho tombotsoan'ny vondrona izay mandà azy” i Francisco Mendez, mpanao gazety :